Freshmarketer: Ongorora, Bvunzo, uye Gadzirisa neiyi Shanduko Optimization Suite | Martech Zone
Mugovera, October 3, 2020 Mugovera, October 3, 2020 Douglas Karr
Huwandu hwebasa riri kuiswa mumadhijitari zvivakwa uye zvemukati izvo zvisiri chaizvo kutyaira chero bhizinesi zvine pfungwa. Izvo zvinotoshungurudza padivi rebasa remaindasitiri uko vatengi vanoomerera pachirongwa kuvhura saiti, kusangana, kana sevhisi… asi zvadaro hazvizodyara munguva nesimba rekushandisa kushandiswa kwepuratifomu.
Optimization ndicho chikonzero chakakosha nei makambani achiwanzokundikana kuona kudzoka kwavo kune investment. Semubatsiri webasa, tinosimbirira kuti kugadzirisa chikamu chese chiitiko. Pasina iyo, kambani haizobudirire uye tobva tazozvidavirira… kunyangwe kana mutengi achiramba kuti kuve kuri kuita chikamu chehurongwa hwese. Hatigone kuramba munhu wese, asi isu tinoedza chaizvo!
Freshmarker's Kutendeuka Optimization Suite Zvimiro
Sevha nguva yako nemari nekusatamba pakati pezvishandiso. Zvese zvaunoda kuongorora, kugadzirisa, uye kugadzirisa iwe webhusaiti zvese zviri mukati Freshmarketer.
Mapapu ekupisa - Fungidzira zviitiko zvevashanyi pawebhusaiti yako. Ziva kudzvanya, mipumburu mune chaiyo-nguva. Spot uye gadzirisa zvakaputsika zvinongedzo, zvinokanganisa mifananidzo, uye zvisina kunaka kuita webhusaiti zvinhu.
Mushanyi Session Kurekodha uye Kudzokorora - Tora ruzivo rwevashanyi vewebhusaiti yako uye uone kwavanonamira, ndezvipi zvikamu zvinonyanya kufarirwa, uye izvo zvinosiiwa.
Kupatsanura Kuedzwa - Bvunzo ma URL mazhinji, akasiyana akasiyana kuti agadzirise dhizaini pane yako saiti, izvo zvinogona kukonzeresa kutendeuka kuri nani uye kuwedzera mari yako.
Kuongorora A / B - Validate webhusaiti fungidziro kuti uone zvirinani kushandura mapeji ewebhu. Gadzira misiyano zviri nyore pamwe neWYSIWYG mupepeti uye kuyera zvinangwa zvemari.
Personalization - Gadzirisa zviitiko zvevashanyi vewebhusaiti yako uye zvinyoronyoro kuvasunda kuti vashandure. Gadzira uye mhanyisa zvakasarudzika ruzivo pasina kubatanidza yako tech timu.
Fomu Ongororo - Gonesa mafomu ako kuti ugadzire mamwe anotungamira. Pimisira kudonhedza, nguva yekuzeza, chiyero chekugadzirisa, uye mamwe metric ekugadzirisa uye kushandura vamwe vashanyi kuita zvinotungamira.
Funnel Analytics - Teedzera vashanyi kudonhedza pane yako akawanda-peji peji webhusaiti, uye uone kuti ndepapi chaipo mukana wekushandura wakarasikirwa
Polls uye Mhinduro - Chengeta vateereri vako vabatanidzwe uye uvadzivise kubva panzvimbo yako nekukonzera mameseji panguva yakakodzera.
Saina Chikwangwani cheFreshmarketer Yemahara
Kuzivisa: Ini ndiri mubatanidzwa we Freshmarketer's Conversion Optimization Suite.
Tags: chiyero chekushandura optimizationcronewmarketer